Iwo mweya iwo kuburikidza nemasuwo ecancer wakayambuka mutsara kupinda mune zvakaratidzwa nyika zvapfuura nepakati pawo, uye kubva pamasuwo e capricorn anodzoka se manas, pfungwa dzepamusoro, humwe, munhu anofunga ega, kusvika kune epasirese-nyika.
Vol. 2 JANUARY, 1906. Nha. 4
Zodiac ndiyo yakavanzika nyeredzi wachi isina magumo iyo, zvinoshamisa, zvisinganzwisisike, inobvisa nguva yekuzvarwa kweasosese, nguva yavo nekuora, uye panguva imwecheteyo inosarudza kushandurwa kwesero reropa mukutenderera kwayo kuburikidza nemuviri.
Iyo Zodiac ndiyo bhaibheri rekusingaperi, nhoroondo uye zvinyorwa zvekugadzira, kuchengetedza, uye kuparadzwa kwezvinhu zvese. Icho chinyorwa che zvese zvakapfuura nezvazvino uye nezvezvinoitika mune ramangwana.
Iyo Zodiac ndiyo nzira yemweya kubva kune izvo zvisingazivikanwe kuburikidza nezvinozivikanwa uye kupinda mukusaguma mukati nokunze. Zodiac yekudzidziswa, uye izvo zvese izvi, iri muzviratidzo zvayo gumi nembiri zvinomiririrwa mumunhu.
Zodiac ine denderedzwa rezviratidzo gumi nemaviri inopa kiyi kune vasina manhumha uye kune izvo zvinoratidzwa zvinoshamisa zvakasikwa. Dhirowa mutsetse wakatsetseka kubva kune cancer kune capricorn. Ipapo zviratidzo pamusoro petambo zvinomiririra zvakasikwa zvisina hunhu; zviratidzo pazasi pemutsara wehosvo kubva kune kenza kuenda kune capricorn inomiririra zvakasikwa zvinoratidzwa mune zvawo zvemweya uye zvepfungwa uye zvemuviri. Zviratidzo cancer, virgo, uye libra, zvinomiririra kupinza kwemweya muhupenyu uye chimiro, kukura kwechimiro muhupombwe, uye kupfeka kwemweya mukati mazvo. Zviratidzo libra, scorpio, sagittary, uye capricorn, zvinomiririra shanduko yemweya kuburikidza nebonde, chishuwo, pfungwa, uye humwe, kutenderera kwekuratidzwa, kuumbwa nekusimudzirwa kwemweya kuburikidza neakaratidzwa phenomenal worlds, uye nekudzoka zvachose asingaoneki nounyoro.
Kana iyo nhengo iyo inotanga kupinda mumuviri kukenza semweya isingabudirire kusvika yakazara uye yakazara kuzviziva, sezvakaratidzwa nechiratidzo capricorn, kana humwe munhu, achiri mukati uye pamberi porufu rwehunhu-hunhu hwacho hwakagadzirwa zviratidzo zvehupenyu, fomu, zvepabonde, chishuwo, uye kufunga-ipapo hunhu hunofa uye huma hwacho hune nguva yekuzorora, uye zvakare anotanga nekufema kuvaka humwe hunhu. Izvi zvinopfuurira mberi kwehupenyu mushure mehupenyu kusvikira basa guru razoitwa pakupera uye humwe hunhu hahuchina kufanira mumuviri, kunze kwekunge izvo zvave kuda.
Breath ndiyo yaive yekutanga kuonekera pakutanga kwekunetswa kwenyika ino; Yakafemera pamusoro pegungwa rehupenyu uye ichifemera kuita hutachiona hwehupenyu; vachiri kufema uye vachifemera pamusoro pemvura yehupenyu, mweya wakaita kuti vafanane neefreal-astral fomu, yakazotevera kuita konkrifomu muchimiro chebonde, umo mweya wakapinda mukati make chimwe chikamu. Ipapo kuchiva mune fomu yemunhu kwakapindukira kune kufema kwemweya uye kwakapinda mune kufunga kwevanhu. Nepfungwa dzakatanga basa remunhu; mufungo karma. Iko kufema, kuburikidza nekufunga, kwakatanga kuendesa hupenyu uye chimiro, zvepabonde uye chishuwo, mune chipfeko cheiyo yepamusoro ego, inova yega munhu. Haigoni kuzara mumuviri wemunhu kusvika munhu azviisa hunhu hwayo kumuuki wayo.
Kuzvimiririra hausi hupenyu, kunyangwe semweya wekufema ndiko kwekutanga kuedza kwekufema komwe kunofemera hupenyu muchiitiko, kunotarisisa mararamiro ehupenyu, uye kutenderera ndima yemabasa ehupenyu. Kusarudzika hakuna chimiro, asi mune yega yega mukati mekuumbwa kwemunhu mumwe kunogadzira mafomu. Kuzvimiririra kunogadzira dhizaini-yehunhu hwayo hunotevera hunofanirwa kuvakwa nehupenyu uye kuberekwa munyika kuburikidza nebonde. Kusarudzika hakusi bonde, kunyangwe zvakakonzera iyo murume kana murume mumwe-murume kuita bonde kuti ikurike ive imwe yevanhurume iyo humwe hunhu hunogona kupinda mukati mayo, kuitira kuti vapfuure nemoto wepabonde uye unogirwa kune masimba enyika, kuti mune zvepabonde. Kuzvimirira kunogona kuita kuti kunze kuve mukati uye mukati mekufema kwekufema, kuve chisingaverengeki uye kugona kutungamira nzira yavo zvakachengeteka kuburikidza nemadutu emhepo, zvido, uye chamupupuri chebonde, kuburikidza nebonde kuita zvishuvo kumhuri nepasirese, uye kuburikidza uye uchiri mukati miviri yebonde kuyera, kuwiriranisa, uye kubatana kuita chinhu chimwe, icho chinoratidzika sechakaparadzaniswa mukushandirana kwaro kwemaviri semweya wekufema uye wega, asi icho chaizvo, chiri chimwe muchiito chake chakakwana. Kufanana hakusi kuchiva, nyangwe kuchimutsa chishuwo kubva kuchimiro chayo chinobva chakwezva nekukwevera humwe muhupenyu hwaratidzwa. Ipapo humwe hunoshanda uine chishuwo, uye unokunda kupokana kunopihwa nechido. Nekudaro pfungwa dzinosimba uye dzakasimba, uye ndiyo iyo svikiro iyo kuburikidza iyo kuchiva kunoiswa mukuita (pisces).
Kufanana hakuna kufungwa, kunyangwe ichiburitsa pfungwa nechiito chayo kuburikidza nemweya wekuchiva uye nokudaro ichiunza nzira yekurwadziswa kweuMwari, maitiro ayo munhu anodzivirira anorwadziwa nemufaro, hurombo nehupfumi, kukunda nekukunda, uye kunobuda vira rekuedzwa rinoshongedza mukuchena kwayo uye kugadzikana mukusafa kwayo. Pfungwa dzepamusoro dzakafanana neiya inonzi pano yemunhu. Iyo ndiyo I-am-I musimboti, iyo inofukidza hunhu uye zvishoma nezvishoma incarnates kubva kuhupenyu kuenda kuhupenyu. Pfungwa yepasi ndiko kuratidzwa kweiyo pfungwa yepamusoro pane uye muhunhu uye ndicho chikamu cheiyo pfungwa repamusoro iyo inogara mumuviri. Izvo zvinowanzonzi pfungwa ipfungwa yepazasi, iyo inoshanda kuburikidza necherobellum neCrebrum, iyo huropi hwekunze.
Pfungwa zvino dzave kuita zvishanu. Izvi zvagara zvichitaurwa sekunhuhwirira, kuravira, kunzwa, kuona, uye kubata kana kunzwa, asi pane mamwe mabasa maviri epfungwa ayo asinganyanyozivikanwa uye asingawanzo kutaurwa nezvawo nekuti haana kushandiswa kana ruzivo nevazhinji. Ivo vanoshandiswa neakakura masheji chete uye kushandisa kwavo kunopedzisa munhu wenyama. Aya manzwi maviri uye basa repfungwa ndiIye-ini-Ini uye I-am-iwe-iwe-iwe-iwe-uri-ini ndinonzwa. Nhengo dzinoenderana dzinofanira kugadzirwa kuti dziite izvi muviri wechipisi uye pineal gland, zvino yakazadziswa mumunhuwo zvake. Iwo hunyanzvi, hwakanamatira chete, huchava ruzivo nehungwaru, kuziva uye kuve.
Pfungwa dzakaderera dzinofanira kubatana nechimwe chinhu, chingave nepfungwa dzakakwirira kana zvimwe nemanzwiro uye zvishuvo. Aya maitiro maviri ndiwo maviri maviri erudo. Iyo inowanzobatanidzwa nemanzwiro uye zvishuwo, uye ndizvo zvinonzi nevanhu "rudo." Rudo rwepamusoro rusina kunyanya kunzi, nderwepamusoro pfungwa. Urwu rudo runogurwa kubva kune zvinonzwa nehunhu; chirevo chayo ndiyo pfungwa yekubayira, kupa iyo pachayo nekuda kwezvibodzwa zvisingabvumike.
Zvinoitika sei kuti pfungwa dzinova nhapwa dzekunzwa, kwezvavanoshuvira, zvemuviri, nyangwe mweya wekufema waive musiki wavo uye waifanira kuva mutongi wavo? Mhinduro yacho inowanikwa munhoroondo yakapfuura yeiyo pfungwa inobereka. Izvi ndoizvi: mushure mekunge mweya-mweya wave kugadzira manzwi uye watanga kuzvishandisa, iko kunyepedzera kunogadzirwa nemaziso kwakatsausa pfungwa kuti izvizivise nehunhu.
Icho chikamu chehunyanzvi chinodaidzwa kuti chepasi pfungwa chinofemerwa muhunhu (mhuka) pakuzvarwa. Iko kudzika kwemweya kunoitika kazhinji kuburikidza nemweya wekufema, ndiko kuti, pfungwa yepasi inopinda mumuviri kuburikidza nemweya wekufema, asi hachisi mweya wekufema. Iko kufema kwemweya kunokonzerwa nepfungwa-yekufema, uye iyi pfungwa-yekufema ndiyo pfungwa yepasi. Iwo iwo mweya wepfungwa, iwo mweya wepamoyo, uye izvo zvinowanzonzi mweya wepamoyo. Hazvizovapo mumuviri kudzamara munhu achizozvarwa patsva, uye murume anozogadzwazve nekuda kwekuti pneuma, mune mamwe mazwi hukama hwakazara, hwazara mumuviri.
Sezvo nyika yes spider ichingoisa padandemutande rekuputika kwayo, saka nyika yemunhu yakaganhurirwa kupfungwa dzekusuka kwake. Nyika yehumwe ndeyese-basa remifungo umo weasuki anofamba uye anoramba achitenderera. Chipenga chinokandira kunze kwayo tambo yesilika ndokuisungira kune chimwe chinhu, uye chimwe, nechimwe, uye pane izvi mitsetse inovaka nyika yayo. Pfungwa inotambanudza mitsara yayo yemifungo uye inovasimbisa kuvanhu, nzvimbo, uye zvinangwa, uye pane izvi, neizvi, kuburikidza nepfungwa idzi dzinovaka nyika yayo. Nekuti nyika yemurume umwe neumwe inoenderana; zvakasikwa zvake zvakasikwa ega; anomuda uye anoda, kusaziva kwake uye kuziva kwake kwakadzika maari. Iye anogara muchisiko chake, izvo zvakasarudzika izvo iye anovaka. Uye chaanotenda kuti ndechechokwadi mifananidzo yekufunga yaanoizadza nayo. Sezvo dandemutande inogona kutsvairwa uye kakatsemara kachiramba kari kuvaka imwe, saka muhupenyu hwese humwe humwe hunokonzeresa kuti ivakirwe yega nyowani nyowani, nyangwe kazhinji hunhu hahuzvizive
Hunhu uye humwe hunoshandiswa zvinoshandiswa nekuchinjanisa zvichawanikwa pakubvunza iwo maratidziro akagamuchirwa zvikuru apo zvese zviri zviviri zvinopihwa senzira maitiro nemaitiro epfungwa nemuviri. Zvinobviswa mazwi aya, zvisinei, zvakapesana mune zvadzinoreva. Hunhu hunobva mwanakomana kuburikidza-nekurira, kana kurira kuburikidza. nounhu yaive mask yaive yaipfekwa nevatambi vekare mumitambo yavo, uye zvakazoreva kuti chipfeko chose chakapfekwa nemutambi apo achimhanyisa chero hunhu. Kufanana kunobva mu-dividuus, hazvisi kuoneka. Zvinorehwa uye hukama hwemashoko aya zvinoitwa pachena uye zvakasiyana.
Kusarudzika izita chete izita. Inogona kushandiswa kune zvakasikwa, nyika, kana munhu, kana kune chero chinhu chinomiririra zvizere musimboti wekuzviziva.
Hunhu ndiwo masiki, jasi, chipfeko chinopfekwa nehunyanzvi. Hwakazvimirira ihwohwo husingaoneki hwekusingaperi hunofunga, hunotaura, uye hunhu kuburikidza nehukwe kana hunhu. Semutambi hunyanzvi hunozvizivisa nemutengo wazvo uye chikamu kana mutambo uchitanga, uye, kazhinji, unoenderera uchizvizivisa wega nechikamu uye uchitamba mumabasa ese ehupenyu anomuka. Hunhu hwakagadzirwa nehupenyu uye fomu uye zvepabonde uye chishuviro icho, kana chakanyatso gadziriswa uye chakabatanidzwa, inofanidza muchina wekufunga umo iwo wega unofema uye kuburikidza nawo unofunga.
Muhunhu mune muti wekuti iwo, kana munhu mumwe, murimi, achamudya uye anohutora, anogona kuunganidza uye adye michero yawo gumi nemaviri, uye kuti akure muhupenyu husingafi. Hunhu chimiro, chipfeko, mask, mune izvo humwe humwe hunoratidzika uye hunotora chikamu charo mune yakasangana-yakashata-mutambo-wekutamba wemazera iye zvino uri kuitwazve padanho renyika. Hunhu imhuka iyo iyo yakasarudzika, mufambi wemazera, yaakaberekera kuti ishumire uye iyo kana ichinge yaviriswa, yakatungamirirwa uye ikatongwa, inotakura mutasvi wayo kuburikidza nemapani egwenga uye kukura kwemasango, munzvimbo dzine njodzi, kuburikidza nemurenje yenyika iyo nyika yekuchengetedza nerunyararo.
Hunhu ihwohwo ushe, mauri humwe humwe, mambo, akakomberedzwa nevashandi vake, pfungwa. Mambo akabata muchivanze mumakamuri emambo emoyo. Nekupa chete zvikumbiro zvakaringana uye zvinoshanda zveavo vanotonga mambo achaunza kurongeka kunze kwekuvhiringidzika, zviri pamutemo uye zvakabvumiranwa kuita kunze kwebongozozo nekumukira, uye ive nenyika yakarongeka uye yakarongedzwa zvakanaka umo chisikwa chimwe nechimwe chipenyu chichiita chikamu chazvo kune zvakanaka zve Nyika.
Mukuvakazve kwehunhu kusati kwazvarwa uye mukuzvisimbisa kwayo pamwe nehupfumi hwenhaka yayo mushure mekuzvarwa, panogara paine mutemo wekuumbwa nekuvandudza kweyekudenga kubva pachikamu chayo chekuwana, pamwe nenhoroondo yezera rega rega. Muhunhu uhwu munogara ipapo humwe humwe humwe musiki, muchengeti, uye zvakare musiki wezvechisiko-mumusangano wekugadzira muviri. Mubato iri mune iyo raibhurari yemashiripiti ine marekodhi ezera uye neyezvinoitika zvenguva yemberi, kune maarmbus ayo uye zvipiyaniso mune iyo masikopi ehekemist anogona kubvisa kubva mune zvekudya zvemuviri quintessence iyo iri elixir yehupenyu, iyo nectar yeVamwari. Mukamuri ino yezvirongwa iyo alchemist inogona kuisa pasi zvido zvekuchiva uye zvishuvo uye zvishuvo zvehunhu kune izvo zvinoshandiswa kuchena, kushandurwa, uye kutsanangurwa, kunozivikanwa kune mashiripiti art. Pano anogadzira simbi dzepasi pasi dzeshungu uye dzechimiro chake chakadzika mune iyo smelter yekuroverera mugoridhe rakachena.
Apa muroyi weaschemist anodya iro basa hombe, chakavanzika chemazera-ekuchinja mhuka kuita murume uye murume kuti ave mwari.
Hunhu hwakakosha kwazvo. Kana hunhu hwaizofanira kuparadzwa manje nei hwakatombovakwa uye nei hwakatenderwa kukura? Kana ikozvino mumamiriro edu ezvinhu, hunhu hwaizoparara saka imwe yaizodzokera kumaroto egrey yekusaita husiku husiku, husiku hwenyika, kana yaizotsvedza kuburikidza neruzha rwekutenderera kusingagumi, kana kugadzwa musungwa usingafi mune pakati penguva, kuve neruzivo asi isina simba rekuishandisa; muvezi asina marble kana chisel; muumbi asina vhiri kana ivhu; kufema pasina kuda, muviri kana chimiro; mwari asina chisikwa chake.
Iye murimi aisawana muchero pasina muti wake; mutambi wacho aisakwanisa kutamba chikamu chake pasina chipfeko chake; mufambi aisakwanisa kufamba asina mhuka yake; mambo aisazova mambo pasina humambo hwake; n'anga yehekemist aigona kushandira mashiripiti pasina murabhorari wake. Asi muti wacho waizobereka michero inovava kana isingabatsiri, kana pasina muchero, pasina murimi wekuutema; chipfeko chingave chisina fomu kana chikamu mumutambo wacho pasina mutambi kuti achipfeke; mhuka yacho yaisaziva kwairi kuenda isina mufambi kuti ainongedze; Humambo hwaizorega kuve hushe pasina mambo kuti avatonge. iyo murabhoritari yaizoramba isina basa pasina iyo n'anga kuti ishande mairi.
Muti hupenyu hupenyu, fomu yemafuta, chishuwo chemhuka; izvi zvinotora muviri wenyama wepabonde. Muviri wese ndiwo murabhoritari; munhu mumwe chete ndihwo huroyi; uye pfungwa ndiyo nzira yekufambisa. Hupenyu ndiye anovaka, fomu ndiye gadziriro, zvepabonde ndiko kuyera uye yakaenzana, chishuwo isimba, akafunga maitiro, uye humwe hwakagadzirwa.
Isu tinogona nyore kusiyanisa pakati pehukama nehunhu. Kana iwe uchifunga nezve imwe yakakosha yetsika uye yetsika musoro manzwi akawanda achanzwika, mumwe nemumwe achiedza kutora hanya uye anodzika vamwe. Aya ndiwo manzwi ehunhu, uye uya anotaura zvinonzwika kazhinji anokunda. Asi kana mwoyo uchikumbira kuzvininipisa nekuda kwechokwadi, pakarepo inzwi rinonzwika zvinyoro zvekuti richiri kupokana. Iri ndiro izwi rekurangarira kwamwari wemukati - pfungwa repamusoro, humwe.
Chikonzero, asi kwete maitiro anonzi kufunga. Inotaura asi kamwe pane imwe neimwe nyaya. Kana mabheti ayo akaitwa pane anouya kunzwa simba uye simba uye kuvimbiswa kwekuti waita chaiyo. Asi kana mumwe akamira kuita nharo uye achiteerera kumanzwi eiyo pfungwa yekufunga yakadzikira, anobva ashungurudzika uye akavhiringidzika, kana kuzvinyengedza mukufunga kuti imwe yemanzwi mazhinji izwi rimwe chete. Kana munhu akakwikwidza achipokana nezwi rimwe chete kana kuramba kuteerera parinotaura, richaguma kutaura uye anenge asisina nzira yekuziva zvakanaka kubva pane zvakaipa. Asi kana mumwe akateerera nehanya kwazvo uye akanyatsotevedzera zvazvinoreva, ipapo anogona kudzidza kutaurirana namwari wake pachiitiko chero chipi zvacho chakakosha, uye afambe murunyararo nedutu roga roga rehupenyu kusvikira azotanga kuzvivikanwa. -I Kuziva.